जाडोमा के खाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुराहरु – साइन्स इन्फोटेक
डिसेम्बर 21, 2019 साइन्स इन्फोटेक5Comments जाडो
अहिले जाडोको मौसम सुरू भएको छ । जाडोमा पनि यो नियम लागू हुन्छ । जाडो यस्तो मौसम हो, जहाँ खानामा अरुचि हुनेहरुलाई पनि खाना रुच्ने गर्छ । सामान्य मानिसले पनि शरीर तताउन तातो खानपिनलाई नै माध्यम बनाउँछन् । आज हामीले जाडो मौसममा कस्तो चिज खानाले स्वास्थ्य लाभ हुन सक्छ भन्ने ’bout प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछौं पक्कै पनि यो पढेर फाइदा उठाउनु हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
Pingback: जाडोमा अदुवा नै किन खाने ? जानी राखौ
Pingback: मानव स्वास्थ्य र जडिबुटीको आवश्यकता
Pingback: यस्तो छन् क्यान्सर हुने प्रमुख कारणहरु, सचेत हौ
Pingback: आज खण्डग्रास सुर्यग्रहण लाग्दैछ, ग्रहण लाग्दा के गर्नुहुँदैन ?
Pingback: यस्ता छन् जडीबुटीबारे महत्वपूर्ण जान्नुपर्ने कुराहरु